Sida loogu xiro iPhone-ka TV-ga fiilooyinka ama aan lahayn: dhammaan xulashooyinka! | Wararka IPhone
Sida loo xiro iPhone TV-ga
Runtii inbadan oo idinka mid ah ayaa iskaga tagey laptop-kii hore dusha sare ee shelf ama khaanad isla markaana waqtigaan hadaf uma lihid inaad wax ka badashaan maadaama laga soo bilaabo iPhone ama iPad-ka wax walba waan sameyn karnaa, sidoo kale waxaan tusi karnaa dhamaan waxyaabaha aaladahayaga ku jira. shaashadda weyn ee qolkeena fadhiga. Apple waxay na siisaa habab kala duwan si aan u awoodno ku xir iPhone ama iPad-ka TV-ga. Haddii aan rabno inaan ku xirno kumbuyuutarkeena, shirkadda lafteedu sidoo kale waxay na siisaa ikhtiyaarro kala duwan, fiilooyin ama aan lahayn. Laakiin sidoo kale waxaan leenahay xulashooyin kala duwan anaga oo aan marin gacanta Apple.
Qaar ka mid ah codsiyada laga heli karo App Store-ka oo noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano qulqulka waxa ku jira, ayaa shaqada AirPlay naafo ka ah soo-saaraha, shaqadan waxay noo ogolaaneysaa inaan ku soo bandhigno waxyaabaha ku jira qalabkeena shaashadda qolka fadhiga iyada oo loo marayo Apple TV. Nasiib wanaagse, awoodda lagu muujiyo waxa ku jira iPhone-ka ama iPad-ka iyada oo la adeegsanayo xarig lama demin karo, sidaas darteed waxay noqoneysaa habka kaliya ee lagu raaxaysan karo waxyaabaha ay ka kooban yihiin barnaamijyadan qolkayaga aan ku qasbaneyn in aan ku sameyno shaashada iPhone ama iPad.
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha ah oo bilaabay inay dhinac iska dhigaan kombuyuutarradooda gacanta iyadoo sababtuna tahay adeegsi la'aantooda maadaama aad iPhone ama iPad aad si ficil ahaan ah u qaban karto hawlo isku mid ah, had iyo jeer, inaad keydiso masaafada. Maaddaama taleefannada casriga ahi ay isbeddeleen, oo keliya iPhone-ka, iibinta kumbuyuutarradu waxay u dhacayeen heerar taariikhi ah isbeddelkuna ma arkin inuu isbeddelo. Sannadkii 2008 ku dhowaad 90% aaladaha ku xiran internetka ee adeegsanaya nidaamka hawlgalka ee Windows, laakiin dhawr bilood, Android wuxuu noqday nidaamka ugu isticmaalka badan ee ku shaqeeya internetka, taas oo ka tarjumeysa isbeddelka isbeddelka ee suuqa ku dhacay sannadihii la soo dhaafay.
1 Isku iPhone si TV aan fiilooyin
1.2 Mac ama PC ku xiran TV
2 Isku xirka iPhone-ka TV-ga fiilooyinka
2.1 Mac ku xiran TV
2.2 Hillaac adabtarada isku xira VGA
2.3 Hillaaca Rasmiga ah ee HDMI Cable
Isku iPhone si TV aan fiilooyin
Habka ugu wanaagsan ee loola wadaagi karo waxyaabaha ku jira iPhone-ka, iPod taabashada ama iPad-ka waa habka loo yaqaan 'AirPlay protocol', oo ay Apple u sameysay U oggolow is-weydaarsiga waxyaabaha fiidiyaha ah, muusigga ama sawirrada leh TV ama nidaam muusig. AirPlay waxay u baahan tahay in qofka wax soo diraya iyo kan wax soo dirayaba ay ku xidhan yihiin isla shabakada WiFi isla markaana sida magaceedu tilmaamayo, isgaadhsiinta ayaa la sameeyaa iyada oo aan lahayn noocyo fiilooyin ah
Apple TV waa aaladda muhiimka ah ee lagu soo bandhigi karo waxa ku jira iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada shaashada TV-ga ee gurigeenna. Sanadihii la soo dhaafay, shaqooyinka ay bixiso Apple TV waa la ballaariyay, gaar ahaan ka dib imaatinka jiilka 4aad ee Apple TV, aalad leh dukaan codsi u gaar ah oo noo ogolaanaya ma aha oo kaliya inaan ku raaxeysano adeegyada muusikada ee qulqulaya sida Netflix, HBO, Hulu .. laakiin waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano ciyaaraha iOS-ka ee shaashadda weyn ee qolkeena fadhiga iyada oo aan loo baahnayn in la wadaago ama muraayadda laga dhigo muraayadda, inta ay la jaan qaadayaan interface-ka qalabkan.
Haddii aad kaliya rabto inaad ku muujiso waxyaabaha ku jira qalabkaaga macruufka ah TV-ga, oo leh Jiilka 3aad ee Apple TV waa in ka badan inta ku filan. Jiilka 3-aad ee Apple TV wuxuu joojiyay iibinta waxyar uun kadib markii la bilaabay nooca jiilka 4-aad, wax yar ka hor sanad ka hor, laakiin maanta wali waxaan ka heli karnaa ilaa 60 euro internet-ka. Ama sidoo kale waxaan dooran karnaa inaan aadno suuqa gacanta labaad, halkaas oo laga yaabo inaan ka helno mid ka jaban.
Hadda Apple waxay na siisaa laba nooc oo Apple TV ah, 32 iyo 64 GB. Jiilka 4aad ee Apple TV waxaa lagu qiimeeyaa 179 euro, halka nooca 64 GB-ka ah loo heli karo 229 euro Apple Store Online. Qalabkan lama heli karo Amazon Sababtoo ah xaqiiqda ah in adeegga qulqulka fiidiyowga ee Amazon aan asal ahaan lagu rakibin aaladda, in ka badan sabab ku filan oo ah madaxa Amazon inuu diido inuu iibiyo qalabkan.
Mac ama PC ku xiran TV
Haddii aan haysanno Mac Mini oo ah xarun warbaahin badan qolkeenna fadhiga ee ku xiran telefishanka, waxaan sidoo kale adeegsan karnaa howlaha AirPlay. Mac-dayada si ay u bilaabaan bixinta adeegan waa inaan ka faa'iideysanno codsiyada sida Aareerver, Milicsiga 2, LonelyScreen o 5KPlayer. Labada codsi ee hore waxaa lagu kala qiimeeyaa 13,99 iyo 14,99 euro siday u kala horreeyaan, halka 5KPlayer iyo LonelyScreen gabi ahaanba waa bilaash. Intaa waxaa dheer, 5K Player waa fiidiyoow dhameystiran oo la jaan qaada ku dhowaad dhammaan qaabab.
Sidan oo kale, adoo adeegsanaya mid ka mid ah barnaamijyadan lagu rakibay Mac-geenna ku xiran telefishankeenna, waxaan si toos ah ugula wadaagi karnaa waxa ku jira iPhone-ka, iPad-ka iyo iPod taabashada tooska shaashadda qolka aan ku nool nahay. adigoon iibsan adapters, aalado ama fiilooyin. AirServer, Reflector 2, LonelyScreen, iyo 5KPlayer ayaa loo heli karaa Windows iyo macOS ecosystem.
Isku xirka iPhone-ka TV-ga fiilooyinka
Mac ku xiran TV
Haddii aanan rabin inaan ku rakibno codsi kasta Mac-geyga si aan ugu hawlgalno howlaha AirPlay waxaan samayn karnaa barnaamijka 'QuickTime' ee asalka ah. Muddo dhowr sano ah, Apple waxay noo oggolaatay inaan tusno waxyaabaha aaladdayadu ka kooban tahay iyada oo loo marayo QuickTime, xitaa waxay noo oggolaaneysaa suurtagalnimada inaan duubno wax walba oo shaashadda ka muuqda. Si tan loo sameeyo waa inaan ku xirnaa iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada Mac-ga adoo isticmaalaya fiilada hillaaca.
Hillaac adabtarada isku xira VGA
Adabtarada Awoodda Apple
Haddii telefishankeenna ruug caddaaga ahi uu sii wado dagaalka oo aanan qorsheyneynin inaan wax ka beddelno. Ama inkasta oo telefishankeena leh isku xirka HDMI uusan lahayn wax xiriir ah oo bilaash ah noocan ah, waxaan ka faa'iideysan karnaa Hillaac adabtarada VGA, adabtarad kaliya tusaysa sawirka qalabkeena shaashadda telefishankayaga ama kormeerahaaga (hadday ahaan lahayd kiiska), maadaama noocan xidhiidhku aanu awood u lahayn inuu u gudbiyo dhawaaqa, sida haddii aannu ku samayn karno hillaaca illaa HDMI .
Haddii aan ku haysanno rikoodh meel u dhow, waxaan ku xirmi karnaa isku xirnaanta headphone-ka qalabkeena si aysan ugu raaxeysan nuxurka maqalka qalabkeenna. Ama, haddii aan leenahay aaladda Bluetooth, waxaan u diri karnaa aaladda dhawaaqa qalabka. Ama sidoo kale, waxaan ku xirmi karnaa dhagaha bluetooth-ga qalabka si aan ugu raaxeysano maqalka anaga oo aan cidna dhibeyn Sida aad u aragto, wax walba ayaa jira xalal.
Hillaaca isku xira VGA Waxay ku leedahay qiimo Apple Store-ka 59 euro. Waqti ka waqti ayaa isku xiraha rasmiga ah, oo ay saxiixday Apple, waxaa lagu iibin karaa Amazon.
APPLE MD825ZM / A - Adapter si loogu xiro iPhone-ka TV-ga
Hillaaca Rasmiga ah ee HDMI Cable
Si rasmi ah loogu yaqaan Isku-xiraha Hillaaca iyo Adapter-ka Digital AV. Fiiladan qiimaha ku leh Apple Store ee 59 euro, ayaa noo oggolaanaysa ku ciyaaro waxyaabaha ka kooban iPhone-keena, iPad-ka iyo iPod taabashada oo wata isku xirka hillaaca oo leh xallinta illaa 1080p on a HDMI-socon TV, borojektar ama bandhig, qeexitaan ka badan in ku filan si ay u 32 inch TV laga bilaabo hadda, in kastoo ay xoogaa gaabin karto haddii aad leedahay TV-ga 50-inji ah ama ka weyn. Sidan oo kale waxaan ku raaxeysan doonnaa cayaaraha kubbadda cagta, taxanaha telefishanka ama filimada aaladaha iOS ee telefishanka, borojektar ama shaashad si weyn.
Adapter-kaani wuxuu na siinayaa aqbasho HDMI ah iyo isku xira danab si aan awood ugu yeesho in aan qalabka ka qaadno inta aan ku cuneyno shaashadda shaashadda weyn. Si aad u awoodo inaad ku xirto waa inaan si gooni ah u iibsanaa fiilada HDMImaadaama adabtaradan uusan ku jirin. Haddii aynaan ku deg degin iibsashada adabtaradan, waxaan si joogto ah u booqan karnaa Amazon, halkaas oo adabtaraddan mararka qaarkood la iibinayo.
Adabtarada HDMI ee ...
Sida iska cad haddii aynaan rabin inaan ku bixinno lacagta ay ku baxeyso adabtaradaas, Waxaan u adeegsan karnaa adapters aan rasmi ahayn oo laga heli karo eBay iyo Amazon labadaba, laakiin waqti kadib waxay joojinayaan shaqada maadaama Apple ay ogaatay inaysan ahayn mida rasmiga ah waxayna noo ogolaaneysaa inaan adeegsano. Intaa waxaa dheer, tayada dhismaha iyo qalabka waxay reebayaan waxyaabo badan oo la doonayo.
Ma taqaan hab kale oo aad awoodid xirmaan iPhone in TV?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Sida loo xiro iPhone TV-ga
Ezcast, xiaomi tv, iyo chromecast sidoo kale waa xulashooyin wanaagsan.
Midkoodna seddexdan aalad ma ogola in aan tusno dhamaan waxyaabaha kujira iphone-keena TV-ga, iyagu isma waafaqsana, waana sababta aysan ugu jirin qodobka.
Apple TV ma kuu ogolaanayaa inaad sameyso wax lamid ah shaashadda Muraayada laakiin shaashadda iPhone-ka ka baxsan?
Waxaan ka fikirayaa inaan mid iibsado, qaasatan maxaa yeelay waxaan haystaa Vodafone TV, iyo illuminaos ma abuuraan codsi SmartTV ah, mana garanayo waxa la sameeyo, tan iyo laydhka go'an-HDMI ee ay tahay inaan ku haysto iPhone-ka shaashadda
Ku jawaab bmdarwinergio
Horeba, dhibaatadu waxay tahay in fiiladaas shaashadda iPhone ay tahay in lagu xidho.
Sidaa darteed ma ogi haddii AppleTV uu taa hagaajinayo.
Taleefonkayga Iphone 6 kuma xidho telefishanka iyada oo loo marayo fiilo HDMI ah hadda ka hor, haddii aan sameeyo, waan ka jaray oo haddii goor dambe aan dib u xidhiidhiyo, markaa wuu isku xidhayaa hadda mana garanayo waxa ku dhacay, maxaan samayn karaa, Ma i caawin kartaa
Jawaab Natanael Gonzalez
Barnaamijka dayactirka ee iPad Pro Smart Keyboard
Maalintii baa timid: isdeji oo taleefankaaga iPhone ha kaa dhigto qaxwahaaga